वार कि पार भनिएको माधव समूहको बैठकले किन गरेन ठोस निर्णय ? यस्तो छ रहस्य — Imandarmedia.com
वार कि पार भनिएको माधव समूहको बैठकले किन गरेन ठोस निर्णय ? यस्तो छ रहस्य
काठकमडौं। निर्णायक भनिएको नेकपा एमाले माधव नेपाल समूहको केन्द्रीय कमिटि बैठक दुई दिन चलेर शुक्रबार सकिएको छ। बुद्धनगरको एक पार्टी प्यालेसमा सम्पन्न बैठक दुई दिन चलेर निष्कर्षविहीन हुँदै सकिएको छ। वार कि पारको रुपमा हेरिएको बैठकले ठोस निर्णय निकाल्न सकेन। पार्टी एकताकालाई केन्द्रमा राखेर भएको भनिएको छलफल अन्तिममा पुरानै निर्णयसहित सकियो।
नेपाल समूहका ९० जना स्थायी कमिटि सदस्य छन्। त्यही छलफलको विषयलाई लिएर पार्टीका करिब ७२ जना केन्द्रीय सदस्यले बैठकमा आफ्नो उपस्थिति जनाएका थिए। भने ५५ जना केन्द्रीय सदस्यले बैठकमा आफ्नो धारणा राखेका थिए।
पार्टी एकतालाई मजबुत बनाएर लैजाने कि नयाँ पार्टीका माध्यमबाट अहिलेको गठबन्धन सरकारमा सहभागीतालाई निरन्तरता दिने भन्ने कुरामा बैठक केन्द्रीत भएको थियो। तर, बैठकले तत्काल सरकारमा नजाने र नयाँ पार्टी पनि नखोल्ने पुरानै निर्णय गरेको छ।
पहिलो दिन बिहीबारको सुरुवाती समयमा केन्द्रीय समितिको बैठकलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने कुरामा नै विवाद देखिएको थियो। पहिलो दिनको बैठक सकिने बेलामा छलफलको विषयवस्तु र छलफलका एजेण्डामा नेताहरुको चर्काचर्की समेत भयो। नेपाल समूहमा रहेका केही प्रभावशाली नेताहरु बैठकमा उपस्थित भएनन्।
नेता भीम रावल शुक्रबार दोस्रो दिनको बैठकमा उपस्थित भएनन्। बिहीबारको बैठकमा उपस्थित कार्यदलका सदस्य समेत रहेका नेता रावलले वार्तामा अहिलेसम्म भएका सहमति, प्रगति र कामको बारेमा बैठकलाई जानकारी गराएका थिए।
उनले तत्काल पार्टी एकतामा जानुपर्ने कुरामा जोड दिएका थिए। तर, उनले राखेका धारणामा बैठकमा उपस्थित बहुसंख्यक सदस्यहरुले असहमति जनाए पछि विवाद उत्पन्न भएको थियो। उनी शुक्रबारको बैठकमै अनुउपस्थित रहे।
यसअर्थमा नेपाल समूहमा पनि दुईवटा समूह स्पस्ट देखिएको छ। पार्टी एकताको लागि अधिकतम प्रयास गरिरहेका मझधारका नेताहरु भीम रावल, सुरेन्द्र पाण्डे, घनश्याम भुषाल, योगेश भट्टराई लगाएतका नेता पार्टी एकता तत्काल गर्नु पर्ने कित्तामा उभिएका छन्।
शुक्रबार बिहान ११ बजे सुरु भएको बैठकमा थप केन्द्रीय सदस्यहरुले आफ्नो धारणा राखे। शुक्रबार सहमतिका लागि छुट्टा छुट्टै कोठे बैठक समेत भए। केन्द्रीय सदस्यहरुले बोलीरहेकै समयमा नेता सुरेन्द्र पाण्डे, घनश्याम भुषाल, रघुजी पन्तबीच छुट्टा छुट्टै छलफल भयो। त्यसपछि बैठकलाई केही समयका लागि बीचमै रोक्दै माधव नेपाल सहितका शीर्ष नेताहरुको छलफल भएको थियो। तर, सहमति भने हुन सकेन।
बैठकमा उपस्थित अधिकांश सदस्यले भने यही अवस्थामा कुनै हालतमा पार्टीमा बस्न नसकिने धारणा राखेका छन्। र केही सदस्यहरुले त नयाँ पार्टी गठन गरेर अगाडि बढ्नु पर्छ भन्ने धारणा समेत राखेका थिए। विगतमा राखिएका सर्त र मागहरु पूरा हुने अवस्था नभएसम्म पार्टी एकता हुन नसक्ने उनीहको भनाइ थियो। उनीहरुले पार्टी एकताका नाममा अध्यक्ष्य ओलीले छलकपट गरिरहेको बताएका छन्।
बैठकको बारेमा बोल्दै नेता भीम आचार्यले भने आत्म सम्मान र लचकताकासाथ कस्तो एकता गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल केन्द्रीत रह्यो। पार्टी एक हुने वा अलग हुने भन्ने सम्मको गम्भिर विषयले बैठकमा प्रवेश पाएको थियो। यो सामान्य एक आध घण्टामा सकिने विषय होइन। यो टुंग्याउन गाह्रो छ। साथै नटुंग्याई नहुने अवस्थामा हामी छौँ।
आफूहरु पार्टी एकताका लागि अधिकतम लचिलो भए पनि यसलाई कमजोरीको रुपमा लिए पार्टी एकतामा गम्भिर धक्का पुग्ने नेतृ रामकुमारी झाक्रीको भनाइ थियो।
बैठक पछि बोल्दै उनले भनिन्, ‘हामीले पार्टी एकतालाई केन्द्रमा राखेर छलफल गर्यौँ। पार्टी एकता भन्दैमा हामीले आत्म सर्मपणको बाटो रोज्ने होइन। कमरेड ओली पार्टी अध्यक्ष्य भएपछि पुष ५ यताका जति पनि असैंवधानिक र निरंकुश गतिविधि भए। संविधानको रक्षाको लागि र लोकतन्त्रको सुदृढिकरणका लागि संसदलाई निरन्तरता दिनुपर्छ र संसदलाई निरन्तरता दिनुपर्छ भन्ने मानेमा हामीले त्यो काम गर्यौँ।’
‘अहिले नेकपा एमालेलाई बचाउने पक्षमा हामी अधिकतर लचिलो भएका छौँ। तर, हाम्रा मुद्दा, विचार र संगठनको सन्र्दभमा राखेका हामी त्यतिकै कठोर पनि छौँ। यो कुरालाई कमजोरीको रुपमा नलिइयोस’, उनले भनिन्।
यस्तै आफ्ना धारणा राख्दै नेता सोम पाण्डेले पार्टी एकता बाहेकका सरकारमा जाने र नयाँ पार्टी खोल्ने लगाएतका विकल्पमा कुनै पनि बैठकमा छलफल नभएको बताए।
उनले भने, अहिले पार्टी एकताको पक्षमा हामीहरु एक भएर अघि बढ्नु पर्छ। अहिले पार्टी एकता भनेको दुई पार्टी मिलेको जस्तो पनि होइन। बाहिर हेर्दा पार्टी विभाजनको अवस्थामा पुगेजस्तो देखिए पनि हामी पार्टी एकताको लागि भरपुर प्रयास गर्ने छौँ।’
बटमलाइन आत्म सम्मान र सहअस्तित्व
माधव नेपाल समूहका अधिकांश सदस्यले पार्टी एक भएर अगाडि बढ्दा पार्टीमा आत्म सम्मान र सहअस्तित्व नभई कुनै पनि हालतमा अघि नबढ्ने धारणा राखेका छन। उनीहरुले सबै नेता कार्यकर्ताले यो पार्टी मेरो हो, मैले गरेको काम हो भन्ने अपनत्व लिन सक्ने आत्मसम्मान सहितको व्यवस्था र सहअस्तित्व अर्थात पार्टी भित्रका सबै नेता कार्यकर्ता बराबर छन भन्ने भावनालाई आत्मसात गरेमा पार्टी एकता सम्भव रहेको धारणा राखेको बुझिएको छ। त्यस्तो अवस्थामा मात्रै पार्टी एकता सम्भव रहेको उनीहरुको निष्कर्ष छ।
नेताहरुको पार्टीमा रहेको योगदानलाई तिलाञ्जली दिएर सडकबाट टिपेर ल्याएको जस्तो अपमानित व्यबहार कुनै पनि हालतमा सह्य नहुने सांसद निरादेवी जैरुको भनाइ थियो।
बैठकपछि पत्रकारसँग कुराकानी गर्दै उनले बेला बेलामा पार्टी एकताका नाममा भइरहेको वरिष्ठ नेता लगाएत समानुपातिक नेताहरुलाई सडकबाट ल्याएका जस्तो ब्यबहार पार्टीमा हुन नहुने बताइन्।
उनले भनिन्, ‘पार्टीमा ठूलो योगदान गरेका नेताहरुलाई देशद्रोही, विद्रोही जस्ता शब्दावली प्रयोग गरिनु हुदैन। र पार्टीलाई २०७५ जेठ २ को अवस्थामा फर्काइनु पर्छ। भनेको वडा कमिटी सहितको व्यवस्थापनको कुरा हिजोको अवस्थाबाट नै सुरु गरिनु पर्छ। तब मात्र पार्टी एकताले गति लिन्छ।’
वरिष्ठ नेता माधव नेपालको अध्यक्ष्यतामा दुई दिन चलको बैठकले पार्टीमा गठित एकता कार्यदलले गरेको १० बुँदे सहमतिलाई नै एकताको आधार ठहर्याएको छ भने थप निर्णय गर्न स्थायी कमिटीलाई जिम्मा दिएको छ।
दुई दिनसम्म चलेको बैठक आज ४ बुँदे निर्णय पारित गर्दै सम्पन्न भयो। बैठकका निर्णय सुनाउँदै नेता रघुजी पन्तले ४ वटा निर्णय भएको जानकारी दिए।
उनका अनुसार प्रतिनिधिसभा विघटनलाई बदर गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई स्वागत गर्ने, एमालेका दुबै पक्षका शीर्ष नेताहरुमाथि भइरहेको विवादास्पद टिप्पणीमा आपत्ति जनाउने, पार्टी एकतालाई अगाडि बढाउने र एमालेको संगठित सदस्यता नवीकरण तथा वितरण रोक्न माग गर्ने निर्णय भएको छ।